Guurka caruurtii Aadam iyo Xaawo – Kaasho Maanka
Aadam feertiisa ayaa looga dhanbaley xaaskiisii xaawo, caruurtoodiina waa is guursadeen oo waa iska ilma dhaleen, waa sida ay diinta islaamka sheegeyso. Diimaha kale ee Ibraahimiyada iyaguna sheeko ku dhow tan ayay soo wariyeen.
Dad badan oo muslimiin ah ayaa si un u dhibsadey dhigaalkeygii walow aysan doodo maangal ah oo ay iiga soo horjeedaan aysan keenin misna wayrax iyo cargaagtan ayaa iiga muuqdey qoraalo ay il wadaageen iyo weliba kuwa isoo wacey oo ila soo xiriirey.
Waxa ugu badan oo ay ka hadlayeena wuxuu ahaa ilmo Aadam oo walaalo ah sidey isugu galmoodeen oo isaga ilma dhaleen. Sida iiga muuqateyna dad diintooda yaqaan ma ahayn oo waxayba la yaaban yihiin ilmo Aadam oo is guursadey, waxaysa ilowsan yihiin inuuba Aadam qayb jirkiisa ka mida naageystey oo ka ilma dhaley waa sida diinta islaamka qabtee.
Waxaa aad iila doodey qoraal iyo maqaalba nin layiraah Ismacil Kaarshe wuxuuna ku doodey ina aysan jirin quraan iyo xadiith sheegayo in ilmo adam is guursadeen iyagoo walaala ah.
Xagee laga farcamey markaan irina waa meer-meerey wuxuuna igu yiri aragti ayaa sheegeyso ilmo Aadam xuurul cayn ayaa jannada looga keeney.
Waxaan ku iri ilmo adam in xuural cayn jannada looga keeney aayad iyo xadiith sheegaya miyaa jira? Maya ayuu iigu jawaabey, kolkaa sidee tayda ku beenisey oo culimada ahlu-sunnaha badankoodu aaminsan yihiin taadana run ku noqotey ayaan waydiiyey? Yaase ku yiri xageese ka keentey xuurul cayn ayaa ilmo dhashoo farcanto ma aayad ama xadiith baad u haysaa?
Dood aad jilicsan oo aan cago ku taagneyn ayay iila muuqatey dooddii saaxiibkey Ismaciil kana hor imaaneysa dhammaan taariikhda islaamka iyo muslimiintaba qaabka ay u soo wariyeen sheekadan inkasta oo firqooyinka Islaamka dhexdooda muran ku godaaman yahay masaladan balse sunniyiintu sidaan hore u sheegay waxay qabaan in guurka walaaluhu waqtigaas xaaraan ahayn sidaa darteedna caruurta Aadam mid waliba guursaday gabadha la mataanta ahayd walaalka kale.
QORMO LA XIRIIRTA: Diinta Islaamka iyo argagaxisada
Dooddeyda waxay raad taariikheed ku leedahay dhammaan taariikhda muslimiinta iyo weliba diinaha kale ee in Aadam laga soo farcamey dhigaya. Waa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin arrinta taranka iyo heerarkuu soo marey, meesha muslimiinta ka aaminsan yihiin ilmo aadamkii walaalaha ahaa isu galmoodeen si ay u farcamaan balse faah-faahin dheeraada kama bixin karo dimaha kale maadaama aqoon badan u lahayn.
Hadaba haddaan lahayn aayad ama xadiith sheegayo in ilmo aadam isu galmoodeen si ay u farcamaan, culimada warkan guurka walaalaha qabtana la dhihi waa ra’yigooda iyo tafsiirkooda aayadaha ama axaadiith aan sixadooda aan wanaagsanayn oo muslimiintu ku kala jabsan yihiin, sidoo kale aanan lahayn meel kale oo laga soo farcamey iyo wiilashii ilmo Aadam ahaa ciddey ka ilma dhaleen ee dumarka ah. Waxa kaliya ee quraanka iyo axaadiithta ku qorane ay yihiin Aadam iyo Xaawo iyo wiilashii markii danbe is diley!! Mala dhihi karaa Aadam iyo wiilashiisaba waxay ka ilma dhaleen Ayeeyo xaawo?
Sababtoo ah nusuusta diiniga ah ayada unbaa ku qoran wax dumara, sidaa owgeed maadaama Aaadam oo feertiisa laga dhanbaley uu ka ilma dhaley iyadana wiilasheedaa ka sii ilma dhaley Aadam daba dii?
Mar haddii quraankii iyo axaadiithtii iyo ijmaacii iyo dhammaan masaadirtii muslimiinta buuq badan ka aloosan yahay masaladan oolaga waayey waxay ka ilma dhaleen oo nas cad ah. In layiraah wiilasha walaalahood ayay naageysteen iyo in layiraah hooyadood ayay ka maarmi waayeen keebaa roon?. Runtii inaad diin aamintaa waa in caqligaada la caayaa waayo malaayiin dad ah ayaa rumeysan in laga soo farcamey walaalo isu galmoodey, iyadoo taas cilmi ahaan ay adag tahay in labo qof dadka oo dhami ka farcamaan!! Iyo nin feertiisii u galmoodey waxay ku tuseysaa quraafadka iyo sheeko xariirada haddii la iska dhaxlo inay dadku lamid noqonayaan qof sarqaansan oo kale, oo wax walbaa uusan awoodin caqligiisa inuu kala saaro.
Diinta islaamka waxaa ku jira wax badan oo garashada diideya iyaguna is burineya waxaana ka mid ah waxyaabahaas xukunka lagu rido qofka ka noqoda rumeynata diinta (حد الردة). Illaaha Quraanku wuxuu kitaabkiisa ku xusay in rumayntu aanay qasab ahayn ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). Illaahay wuxuu aayad kale ku canaantay nebiga isagoo leh (ma adaa dadaka ku qasbaya inay rumeeyaan diinta –...